Waa Maxay Nafaqo-Daro ‘Malnutrition? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Kaalay Illa Wadaag Taladaan Dhalinyaro, “Waa Kuu Muhiim” |Tukesomalism.com
Afrikaan.so, April 9, 2016
Muxuu Sargaalkaan Ku Dilay Xaaskiisa?
Miski Cabdinuur Salal — October 9, 2019
Nafaqo-daradu waa xaalad halis ah oo dhacda marka uu qofku cuno cunno, taasoo aheyn xaddiga nafaqada saxda ah ee jirka u baahan yahay. Nafaqo-darada waxaa loo qey-biyaa labbo qeybood oo kale ah:
1-Nafaqo-daro jirka uu waayo nafaqo ku filan (Under-nutrition).
2-Nafaqo-daro jirka uu helay nafaqo ka badan xaddigiisa (Over-Nutrition).
Tusaalle qofka da’diisa ay tahay 20sano waxaa laga rabaa in uu noqdo 60kg, kawaran haddii uu noqodo 35kg, waxaa ku dhacay qofkaas nafaqo-daro uu jirkiisa waayey xaddiga nafaqada ku filaneyd, halka haddiii u noqodo qofka 20sanno jirka ah 200kg aan dhaheeynno waxaa ku dhacday nafaqo-daro uu jirkiisa helay nafaqo ka badan xaddigiisa.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka waxa ay sheegtey 463Milayan oo dad waaweyn ah oo waliba ku nool daafaha caalamka in ay ku dhacdo nafaqo-daro, halka 159milyan oo caruur ah, kuwaas oo ku kale nool daafaha caalamka ay saameyso nafaqo-daro caafimaadkooda.
Waddamada soo koraayo waxa u badan oo ay u dhintaan waa nafaqo-darada nooca jirka uu waayo nafaqo ku filan, halka waddamada hormaray ay ka cabanaayaan nafaqo-dardada nooca jirka uu helaayo nafaqo xad dhaaf ah.
Caalamadaha Nafaqo-darada lagu garto waxaa kamid Ah;
Culeeska qofka qaangaarka ah oo ka badan 180kg ama ka yar 35kg.
Qofka oo ku yaraato rabitaanka cunnada.
Qofka oo lagu arko sara u kaca cadaadiska dhiigga.
Qofka oo timaha daataan.
Qofka oo socodka ku adkaado.
Qofka oo murug ku furmato,sababo la xariiro hadaladda Bulshadda ay ku yiraahdaan, sida in ay dhahaan oo kale waad buuran tahay.
Qofka oo neefsiga ku adkaado.
Siddee ayaa looga Hortaggi Karaa Nafaqo-darada?
1-Cunista cunno dheelitiran waxa ay ka qeyb qaadataa ka hortagga nafaqo-darada.
2-Jimicsi joogta oo qofka sameeyo waxa ay ka qeyb qaaddataa ka hortagga nafaqo-darada.
3- Qofka in uu badsado cunista qudaarta cagaaraan.
4- Qofka oo cabbo biya badaan maalin waliba.
Tags: Waa Maxay Nafaqo-Daro( Malnutrition?
Next post Sooyaalka degmada Xarfo: Caqabado, Fursado iyo Ilbaxnimo
Previous post Hoog Muujiye Aan Jirin
February 11, 2020 at 4:56 am	— Reply
Thanks for this information I would like to spread this information to the all Somali moms out there and families.. so I’m gonna post this in the instagram.. if you have one please do share so I can tag you .. thanks again.